Iindaba-Ngaba ibhetri yamandla amatsha isalulungele utyalo-mali ..
Khokela ibhetri ye-Acid
Umjikelo webhetri onzulu
YENZA ibhetri yeVRLA
Ibhetri yesiphelo esingaphambili
Ubomi bebhetri obude
Ibhetri ye-12V LiFePo4
Ngaba ibhetri yamandla amatsha isalulungele utyalo-mali ..
Icandelo lezamandla elitsha liye laqatshelwa kwikapitali ukusukela kunyaka ophelileyo, kwaye wonke umzi mveliso ufumene ukwanda okungazange kubonwe ngaphambili. Ukusuka ezantsi ezantsi amandla ezithuthi, ezinje ngeTesla, i-BYD, i-Weilai, njl. I-Ganfeng lithium, i-Tianqi lithium, i-Huayou cobalt, njl., Zonke ezi zihlala zonyuswa yimali ngenxa yokuchuma okuphezulu kwamandla amatsha.
Ukusukela kulo nyaka uphelileyo, inqanaba lokukhula kweenkampani ezinxulumene namandla liye laphindaphindeka kali-10 kwaye ama-3-5 aphantsi. Iinkampani ezininzi “zikwinqanaba eliphezulu” kwaye amaxabiso azo abizixabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, emva kohlengahlengiso loMnyhadala weNtwasahlobo, icandelo lebhetri yamandla entsha iphinde yabuya kwakhona, ikhokela ekusondeleni kwinqanaba eliphezulu. Abatyalomali abaninzi bayoyika ukufumana icandelo elitsha lamandla kwaye bayiphose. Nokuba ibhetri yamandla entsha ixabisa utyalomali okanye hayi ingumbuzo omkhulu entliziyweni yomntu wonke.
Amandla amatsha lithuba elinqabe kakhulu e-China. Kwixesha elidlulileyo, i-China ibibambe iindawo ezininzi, kodwa ngeli xesha i-China ayilahlekanga kwindawo yokuqala, kwaye kunokwenzeka ukuba ikhokele uphuhliso lwamandla amatsha kwihlabathi liphela.
Inzondelelo yamandla amatsha kumazwe angaphandle ayikho ngaphantsi kunaleyo yase China. Ngomhla we-26 kaMeyi kulo nyaka, i-US Senate Committee yezeMali yapasisa umthetho oyilwayo ukonyusa inani lekhredithi yerhafu yemoto kunye nokwandisa ububanzi bayo besicelo. Emva kokunyulwa kuka-Biden, urhulumente wase-US uqhubekile nokukhuthaza uphuhliso lwamashishini ezithuthi zombane, kwaye nomongameli ngokwakhe waya e-Ford ukuzisa iimpahla, ezibonisa inqanaba lokuqwalaselwa.
Amazwe asixhenxe aseYurophu (iJamani, iFrance, iBritane, iNorway, iSweden, i-Itali kunye ne-Spain) nawo ayayiqonda imeko yophuhliso lwamandla amatsha. Kwi-2020, umthamo wentengiso yezithuthi zombane kumazwe asixhenxe aseYurophu uzonyuka nge-164% ngonyaka, ukubhengeza ukufika kwexesha elitsha lamandla ngezenzo ezenziwayo.
Ngokwembono yendalo yangoku, amandla amatsha ayangqinelana, ukufumana elona nqanaba liphezulu lokuqwalaselwa kunye nenkxaso kwihlabathi, esisizathu esisisiseko sokunyuka kwetyathanga lezamashishini amatsha kwiminyaka yakutshanje.
Okwangoku, amandla amatsha abe yinto eqhelekileyo. Uphuhliso lwezithuthi zamandla ezitsha zitshintshile ukusuka kwinkxaso-mali eqhutyelwa kwintengiso, kwaye ulwakhiwo lwentengiso lwenziwe ngcono; Umgaqo-nkqubo wenkxaso mali waseYurophu uza kuqhubeka nokusebenza, kwaye indlela yokukhula ephezulu iya kuqhubeka ngokwanda kokubonelela okuninzi; U-Biden weza kulawula e-United States ngemigaqo-nkqubo esebenzayo. Icala lomgaqo-nkqubo liphakamise amandla amatsha ukuya kubude obutsha, kwaye ukukhutshwa komthamo wemveliso ngumcimbi wexesha kuphela.
Ewe kunjalo, eyona nto siyixhalabeleyo malunga nokuba kufanelekile ukubandakanya kwiibhetri zamandla ezintsha ngeli xesha. Ukujonga imeko yophuhliso kule minyaka mi-5-10 izayo, kusafanele ukungenelela ngeli xesha, kodwa iinkampani ezinamaxabiso kunye nokukhula kwazo okungahambelaniyo kufuneka zikuphephe.
Ngaba ujonge ulwazi oluthe kratya malunga neemveliso zobuchwephesha beDET kunye nezisombululo zamandla? Sineqela leengcali elikulungele ukukunceda rhoqo. Nceda ugcwalise le fomu kwaye ummeli wethu wentengiso uza kuqhagamshelana nawe kungekudala.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu kwaye ufuna ukwazi iinkcukacha ezithe kratya, nceda ushiye umyalezo apha, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Idilesi yaseShenzhen; Idilesi yeDongguan
Umnxeba: +86 18664110730